बाइबलले मलाई कसरी मदत गर्न सक्छ?—बाइबलसित परिचित हुनुहोस्‌ | युवाहरू सोध्छन्‌
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अलुर अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उड्मुर्त उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काचिन काजाक काजाक (अरबी) काबुभरदियानु काम्बा कालांगा (बोत्स्वाना) किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किश कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (हुआल्लागा हुआनुको) क्षोसा गा गाउरानी गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुभास चेक जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टालियन टिग्रिन्या टेटन डिली टोंगन डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (वास्टेका) निऊ नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पंजाबी (शाहमुखी) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पिजिन (पश्चिम अफिका) पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोमेरानियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फान्टे फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाओले बाटाक (टोबा) बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मराठी मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिङ्रेलियन मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानी (भ्लाक्स, रुस) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुन्डा वारे-वारे वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभाक साङ्केतिक भाषा स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
“मैले बाइबल पढ्‌ने कोसिस नगरेको होइन तर यत्ति धेरै कहिले पढेर सिद्ध्याउने!”—१५ वर्षीया ब्रिआना
के तपाईँ पनि त्यस्तै महसुस गर्नुहुन्छ? त्यसोभए यो लेखले तपाईँलाई मदत गर्न सक्छ!
बाइबल किन पढ्‌ने?
म बाइबल कसरी पढ्‌न सक्छु?
धेरैलाई बाइबल पढ्‌न त्यति रमाइलो नलाग्न सक्छ। यदि तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भने, त्यो कुनै नौलो कुरा होइन। यसो हेर्दा बाइबल एक हजारभन्दा धेरै पाना भएको, स-सानो अक्षर भएको अनि एउटा पनि चित्र नभएको किताबजस्तो देखिएला। त्यसको तुलनामा टिभी वा भिडियो हेर्नु कता हो कता रमाइलो जस्तो लाग्न सक्छ।
तर यसरी विचार गर्नुहोस्‌: तपाईँले खजानाहरू राखिएको पुरानो बाकस भेट्टाउनुभयो भने त्यसभित्र के-के होला भनेर हेर्न उत्सुक हुनुहुन्‍न र?
बाइबल त्यो बाकसजस्तै हो। यो बुद्धिका खजानाहरूले भरिएको छ। बाइबलमा पाइने बुद्धिले तपाईँलाई यी कुराहरू गर्न मदत गर्छ:
सही निर्णयहरू गर्न
आमाबुबासित राम्रो सम्बन्ध बनाइराख्न
असल साथीहरू भेट्टाउन
हुनत बाइबल पुरानो किताब हो, तैपनि यो हाम्रो लागि उत्तिकै उपयोगी छ। किन? किनकि “धर्मशास्त्रमा भएका सबै कुरा परमेश्‍वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो।” (२ तिमोथी ३:१६) यसको मतलब बाइबलमा दिइएका सल्लाहहरू सबैभन्दा उत्तम स्रोतबाट आएको हो।
बाइबल बुद्धिका अमूल्य खजानाहरूले भरिएको बाकस हो
एउटा तरिका, सुरुदेखि अन्तसम्मै पढ्‌नुहोस्‌। यसरी पढ्‌दा बाइबलको मूल सन्देश बुझ्न सक्नुहुनेछ। बाइबल थुप्रै तरिकाले पढ्‌न सकिन्छ। दुई वटा तरिका विचार गर्नुहोस्‌:
तपाईँ बाइबलका ६६ वटा किताबहरू जुन क्रमअनुसार राखिएका छन्‌ त्यही क्रमअनुसार उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म पढ्‌न सक्नुहुन्छ।
तपाईँ कालक्रमअनुसार बाइबल पढ्‌न सक्नुहुन्छ। मतलब, बाइबलमा उल्लिखित घटनाहरू जुन क्रमअनुसार घटे, त्यसैअनुसार बाइबलका किताबहरू पढ्‌दै जान सक्नुहुन्छ।
सुझाव: नयाँ संसार अनुवाद-को अतिरिक्‍त लेख १२ मा येशू पृथ्वीमा हुनुहुँदा उहाँको जीवनमा घटेका घटनाहरूको क्रमबद्ध सूची पाउन सक्नुहुन्छ।
दोस्रो तरिका, तपाईँले हालै सामना गरिरहनुभएको चुनौतीसित मिल्ने विवरण छानेर पढ्‌नुहोस्‌। उदाहरणको लागि:
के तपाईँ भरोसायोग्य साथीहरू भेट्टाउन चाहनुहुन्छ? (अङ्‌ग्रेजी) त्यसोभए जोनाथन र दाऊदको कथा पढ्‌नुहोस्‌। (१ शमूएल, अध्याय १८-२०) त्यसपछि “वफादार साथीहरू भेट्टाउने तरिका” भन्‍ने अभ्यास सामग्री हेर्नुहोस्‌ र त्यो विवरणबाट सिक्न सकिने व्यावहारिक पाठ विचार गर्नुहोस्‌।
के तपाईँ प्रलोभनहरू सामना गर्न अझै सक्षम हुन चाहनुहुन्छ? (अङ्‌ग्रेजी) यूसुफले प्रलोभनको सामना गरेको विवरण पढ्‌नुहोस्‌। (उत्पत्ति, अध्याय ३९) त्यसपछि “प्रलोभन आइपर्दा इन्कार गर्ने तरिका . . . यूसुफ—भाग १” अनि “झूटो आरोप लगाइयो! यूसुफ—भाग २” भन्‍ने अभ्यास सामग्री हेर्नुहोस्‌ र त्यो विवरणबाट सिक्न सकिने व्यावहारिक पाठ विचार गर्नुहोस्‌।
के तपाईँ प्रार्थनाले कसरी मदत गर्न सक्छ भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ? (अङ्‌ग्रेजी) नहेम्याहको अनुभव पढ्‌नुहोस्‌। (नहेम्याह, अध्याय २) त्यसपछि “परमेश्‍वरले तिनको प्रार्थनाको जवाफ दिनुभयो” भन्‍ने अभ्यास सामग्री हेर्नुहोस्‌ र त्यो विवरणबाट सिक्न सकिने व्यावहारिक पाठ विचार गर्नुहोस्‌।
सुझाव: सधैँ शान्त ठाउँमा बसेर बाइबल पढ्‌नुहोस्‌। त्यसो गर्दा पढेको कुरामा ध्यान दिन सजिलो हुन्छ।
तेस्रो तरिका, कुनै विवरण वा भजन रोज्नुहोस्‌, त्यो पढ्‌नुहोस्‌, त्यसपछि त्यो कुरा तपाईँलाई कसरी लागू हुन्छ विचार गर्नुहोस्‌। पढिसकेपछि आफैलाई यस्ता प्रश्‍नहरू सोध्नुहोस्‌:
यहोवाले यो विवरण बाइबलमा किन लेख्न लगाउनुभयो?
यसबाट यहोवाको व्यक्‍तित्व वा काम गर्ने तरिकाबारे म के सिक्न सक्छु?
यो कुरा म आफ्नो जीवनमा कसरी लागू गर्न सक्छु?
सुझाव: एउटा लक्ष्य राख्नुहोस्‌! तपाईँ कहिलेदेखि बाइबल पढाइ सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो मिति लेख्नुहोस्‌।
“म आफूलाई चासो लाग्ने बाइबलका किताबहरू छानेर पढ्‌छु। त्यसो गर्दा दिनदिनै बाइबल पढ्‌ने आफ्नो लक्ष्यमा लागिरहने उत्प्रेरणा पाउँछु। उदाहरणको लागि, मलाई हितोपदेशको पुस्तक एकदमै मन पर्छ। त्यसमा पाइने बुद्धिका बहुमूल्य रत्नहरू पढ्‌दा म निकै प्रोत्साहन पाउँछु।”—क्लोए
“म सुत्नुअघि एउटा वा दुइटा भजन पढ्‌ने कोसिस गर्छु। भजनको पुस्तकका लेखकहरूको भावना हाम्रो भावनासित मिल्दोजुल्दो छ। सुत्नुअघि कुनै सकारात्मक कुरा सोच्नु महत्त्वपूर्ण छ। भजनको पुस्तक पढ्‌दा यहोवा साँचो सान्त्वना दिने परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनेर म अझै विश्‍वस्त हुन सकेको छु।”—स्टेफन
थुप्रै मानिसहरूलाई बाइबल दन्त्यकथाहरूले भरिएको किताब हो, पुरानो जमानाको किताब हो अथवा यो बुझ्नै सकिंदैन जस्तो लाग्छ। तर यो सरासर झूटो हो।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने बाइबलले मलाई कसरी मदत गर्न सक्छ?—भाग १: बाइबलसित परिचित हुनुहोस्‌
बाइबल पढाइबारे युवायुवती बताउँछन्‌